Plywood Bintangor, Plywood ara-barotra, Plywood fananganana konkretera - Edlon
Board of Fancy-Plywood-Mdf-Block
Edlon Wood Products Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2003, tao afovoan'i HuaiHai ara-toekarena, manankarena loharanon-jiro sy mpiasa mahay. Mifantoka hatrany amin'ny vahaolana vita amin'ny hazo amin'ny fananganana sy fanamboarana fanaka izahay, ny vokatra lehibe ao anatiny dia misy ny loharanom-pitondrana, FILM FACED PLYWOOD, DOKIM-PIVAVAHANA DOKOLOMPOANA ary HPL PLYWOOD, karazana lisitra laminate misy ny PETG, ACYLIC, PVC, MELAMINE …… Izahay dia manenjika. Ny fampiasana maharitra ny alàlan'ny kitay amin'ny alàlan'ny kalitao voalohany, dia manorina anarana tsara sy madio EDLONWOOD foana isika, izany no manome antoka ny fitsipika ara-barotra sy ambony amin'ny mpanjifa sarobidy.
Ny tontolon'ny Laminate dia fanodinana faharoa amin'ny fototry ny plywood, mandrakotra ny velarany miaraka amin'ny takelaka fitaovana hafa mba ahafahana mampiasa tanjona hafa. Amin'izao fotoana izao dia afaka manolotra fitaovana toa ny HPL, PVC, PETG, acrylic, Melamine, UV, sns ... Azo ampiasaina amin'ny fanaka avo, kaopy, fandroana sns.
Ny poavaly Door dia manondro ny plywood amin'ny habe manokana ampiasaina amin'ny panatonana varavarana. Azontsika atao ny manome vokatra avy amin'ny loko isan-karazany, fomba ary fomba mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa. Tahaka izany koa, izahay dia mampivelatra mavitrika ireo karazam-bokatra vaovao rehetra, ary manome ny mpanjifa ny vokatra tsara indrindra no tanjonay.
Ny biraon'ny fanaka no fitaovana poavola fahita indrindra, izay ampiasaina amin'ny fanamboarana fanaka, toy ny valizy, lambam-basy, sns. Manana hery sy fisaka malefaka izy, ary misy vokatra manokana koa, LVL, singa ampiasaina amin'ny fandriana fandriana.
Telefaonina: 0086- (0) 516-66688198
Tags - Products mafana - Sitemap
Momba ny Decon
Fahasamihafana eo amin'ny plywood sy bl ...
Safidy fanaka, ny ch ...
Endrika tontolon'ny melamine
Fampiasana plywood lehibe indrindra